Analysing the charac - 英语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: analysing the characteristics of design art (英语 - 缅甸语)
HCoVs ၏ တိရစ္ဆာန်မူလရင်းမြစ်များကို မဆွေးနွေးမီ HCoVs ၏ ရောဂါလက်ခံမှုဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ သဘာဝ၊ ရောဂါသိုမှီးရာ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် ချဲ့ထွင်မှုဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် ထူးခြားသောလက္ခဏာများကို ဆွေးနွေးစေသည်။
The upper estimate of this range is consistent with the results from the first random testing for COVID-19 in Germany, andastatistical study analysing the impact of testing on CFR estimates.
ဤအတိုင်းအတာအတွက် အမြင့်ဆုံးခန့်မှန်းချက်သည် ဂျာမဏီနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 အား ပထမဆုံး ကျပန်းရွေးချယ်စမ်းသပ်မှုနှင့် အသေအပျောက် ဖြစ်မှုနှုန်း ခန့်မှန်းချက်များအပေါ် စမ်းသပ်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုအား ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များဖြင့် စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိရချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
A 29-nucleotide deletion characteristic of SARS-CoVs has been found in strains isolated at the beginning of the human epidemic.
SARS-CoVs ၏ 29-မျိုးရိုးအခြေခံကလပ်စည်းကို ပယ်ဖျက်သည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို လူသားများအကြား ကူးစက်မှုအစပိုင်း၌ သီးသန့်ခွဲထုတ်ခဲ့သော မျိုးကွဲများတွင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Third, the transmission of SARS-CoV-2 also shows interesting patterns characteristic of both community-acquired HCoVs and SARS-CoV.
တတိယအချက်အနေဖြင့် SARS-CoV-2 ၏ ကူးစက်မှု၌ လူမှုရေးရာမှတဆင့် ကူးစက်သော HCoVs နှင့် SARS-CoV နှစ်မျိုးစလုံးတို့၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံစံများကိုလည်း ပြသသည်။
ganu kda (他加禄语>英语)tum achi english bol leti ho (印地语>英语)sanay na ako na hindi kita ka chat (他加禄语>英语)katsomissaan (芬兰语>英语)tukang solek (马来语>英语)apa (简体中文>马来语)one day i will be happy without you (英语>印地语)focal person (英语>他加禄语)시장 (韩语>他加禄语)pinapatag ang daan (他加禄语>英语)happy birthday (英语>普什图语)breaking news (英语>他加禄语)manliness (英语>他加禄语)kukumbwa (斯瓦希里语>英语)dekat (印尼语>俄语)çàïóñòèòü (俄语>英语)son las once y cuarto de la manana (西班牙语>英语)manyoya ya kondoo (斯瓦希里语>英语)sempre me rege me guarde me ilumine amém (葡萄牙语>拉丁语)beary (法语>英语)નદી ની આત્મકથા (英语>古吉拉特语)automatismos (葡萄牙语>英语)i just fall in love again (英语>他加禄语)ek is baie jammer (南非荷兰语>英语)lagerfeld (荷兰语>英语)